Faaqidaadda Toddobaadka, 15 February 2019 page pageno
Khamiis 15 February 2019
Faaqidaadda: Musuq-maasuqa lagu eedeeyey xukuumadda
Faaqidaadda: Sanad kadib doorashadii Muuse Biixi
Faaqidaadda: Xaaladda maamulka Koonfur Galbeed
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu maanta ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, oo dhowaan uu is-casilay madaxweynihii maamulkaas Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Faaqidaadda: Dastuurka iyo khilaafka madaxda Soomaalida
Barnaamijka Faaqidaadda waxa uu maanta ku saabsan khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo arrimaha dastuuriga ah ee la isku hayo.
Faaqidaadda: Taageerada Dowladda Soomaaliya ee Sacuudiga
Maxay la macno tahay taageerada dowladda Soomaaliya ee Sacuudiga mase loo baahnaa xilligan. Waa qodobka aan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadka,
Faaqidaadda: Xusuusta qaraxii 14-ka October 2017
Barnaamijka Faaqidaadda waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay sanadguuradii koowaad ee kasoo wareegtay qaraxii isgoyska Zoobe ee Muqdisho ee dhacay 14-kii October 2017
Faaqidaadda: Kulanka EPRDF iyo saameynta Soomaalida
Barnaamijka faaqidaadda waxaan toddobaadkan ku eegeynaa saameynta go’aannada kasoo baxa shirka EPRDF ay ku yeelan karaan mustaqbalka gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia.
Faaqidaadda: Xaaladda Amni ee Muqdisho
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho, oo maalmihii dhowaa sii xumaaneysay.
Faaqidaadda: Xiisadda siyaasadeed ee Galmudug
Xiisadda Galmudug ayaa soo shaac baxday kadib markii guddoomiyaha baarlamanka iyo madaxweyne ku xigeenka diideen go’aanadii shirka Kismaayo ee uu wax kasoo saxiixay madaxweyne Xaaf.
Faaqidaadda: Khilaafka dowladda iyo maamullada
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay shirka toddobaadkan ka dhacay magaalada Kismaayo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, kaasi oo muujiyey mar kale in khilaaf uu ka dhex jiro dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
Faaqidaadda: Diyaar Ma u Yihiin Ciidamada Inay AMISOM Amniga Kala Wareegaan?
Ku soo dhawaada Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan maanta diiraadda ku saareyno in ciidamada Soomaaliya ay hadda u diyaarsan yihiin qaadidda howlgallo milatari oo culus iyo in ay amniga dalka kala wareegaan ciidamada AMISOM.